Nhoroondo yeCosta Costa Rican Vibe neBetOWI
Zita rakanaka risingazivikanwi yebhokisi rebhokisi? Zvakanaka, regai tibatsire pachena izvozvo. OWI inotsanangurwa neOxshore Wagering International, saka zita ravo rose rinomiriraBet Offrere Wagering International. BetOWI inobvumirwa nehurumende yeCosta Rica uye kunyanya, iyo inowanikwawo muSan Jose, Costa Rica. Iyo webhusaiti yakadzorerwa kumashure mu2011 uye sezvo boka riri shure kweBetOWI iri kutengesa vanhu vanofarira uye kutakura makore emakambani ane ruzivo, iri nyore puzzles kugadzirisa kuti BetOWI ibhuku remitambo yeBitcoin uye fiat bettors.
Ramba uchiverenga izvi Bitcoin sports review kuti uwane zvakawanda pamusoro pemari yekubhadhara yaBetOWI, mabhonasi, mabheti ekusarudza, nezvimwe.
Nenzira yakanaka, hapana mvumo yenyika yevatambi veUnited States paBetOWI. Icho chinoreva kuti zvigaro zvose zvakafukidzwa kune vagari veUnited States. Kunyange zvazvo mitsara yemisika yakasati yakadzika, nzvimbo yacho inofukidza zviitiko zvinokosha. Izvi zvinosanganisira baseball, bhora, basketball, hockey, tennis, gorofu, MMA, mabhoti, uye Bitcoin nhabvu inopokana.
Kana uri kutsvaga mitambo yekaseino unogona kutamba uchimirira kuti zviitiko zvako zvitange, BetOWI inopa casino mitambo uye kutengesa bhiza. Iwe unogona kutamba pa-themed-slots, baccarat, blackjack, roulette, nevamwe kune iyi webhusaiti.
Uyezve, chikwata chinosvika pane zvigadzirwa zvemasasa. BetOWI inonzwisisa kuti vateereri vemitambo havagoni kuiswa kumashoni avo zuva rega rega. Vangave vaine nguva yakazara yemabasa kana kuti munogona sei kunakidzwa nemutambo paunenge uri pakombiyuta? Saka, vakaita kuti nzvimbo yavo ishamwaridzane sepamunobvira kune vatengesi vanogona kunakidzwa nekuisa vatambi kunyange kana vari pane mitambo yemitambo vachitarisa mutambo kana kuona chiito chacho chichirarama.
Tarisira zvakawanda kukurudzira kuti uite kana uchiridza paBETOWI. Izvo zvemitambo hazvina maturo ekupa zvikwereti zvakanyanya. Kutanga ndeye bhonasi yavo yekugamuchira ye100% kusvika ku $ 500. Asi kana uchida rollover maduku, unogona kusarudza 50% kusvika ku $ 250. Iwe unogona kutarisira mabhonasi chaiwo emitauro yakananga zvakare, izvo zvinoita kuti chikamu chekutsvaga chive chakasiyana. Somuenzaniso, panguva yeCAAA March Madness, vanomhanya makwikwi emakadhi. Kana kuti yeNFL apo maSpiel Super Bowl makuru.
Kuderedza uye kubvisa zvinhu zviviri zvinokosha kuitira kuti sportsbook ibudirire. Kunyange imwe inoratidzira webhusaiti yakakura uye mitambo yekaseino, asi haikwanise kutengesa zvikwereti zvakanaka, onlinebookbook inonzi means squat. Asi, izvi hazvirevi kuBetOWI. Bhuku reCosta Rican rinopa zvinhu zvitatu zvokusarudza uye kubvisa. Iwe unogona kusarudza kubva kuBitcoin, Visa, Mastercard, Cash Cards, MoneyGram, nezvimwe. Ramba uchifunga kuti kushandisa zvinyorwa uye Anoshandisa Bitcoin inogona kukubatsira munguva yakareba nekutengesa kwayo nokukurumidza, mari shoma, uye kusingazivikanwi.
Kana iwe ukaitika kuti uine mibvunzo, unogona kutsvaga yavo FAQ peji iyo inopa mhinduro kune zvakajairika mibvunzo pane kumirira mhinduro yemumiriri wevatengi. Asi kana iwe uchinyatsoda rubatsiro, unogona kutumira email kuBetOWI yakatsaurirwa rutsigiro chiteshi.
Zvakaitika zvinoratidzika kunge zvakabatsira BetOWI kuzvisimbisa pachayo mumhizha. Ivo vakataura nezvezvinodikanwa zve greenhorn uye veteran sports bettor. Nemamwe makore mashomanana kubata uye kuvandudza mitambo yekaseino, zvichida kusanganisira mararamiro ari kurarama, uye kuwedzera mamwe misika yemabhizimisi, BetOWI inogona kunge iri imwe yepamusoro yemabhuku ekugutsikana kunze uko.